Vaovao - fanasokajiana ny karbaona kalsioma
Fanasokajiana ny karbaona kalsioma
Ny karbaona kalsioma dia azo zaraina ho: Karbaona kalsioma mavesatra, Karbaona kalsioma maivana, Karbaona kalsioma mavitrika, kalsioma desulfurization gazy karbonika karbonika karbonika, super karbonina calcium, sns.
Karbaona kalsioma mavesatra
Tsy miova ny endrik'ilay gazy karbonika mavesatra, miovaova be ny haben'ny sombiny, ary ny sisiny dia misy sisiny sy zorony, marokoroko ny velarany, midadasika kokoa ny fizarana haben'ny zara, ary lehibe kokoa ny haben'ny sombiny. Ny sakan'ny sombiny sombiny dia 1-10μm amin'ny ankapobeny. Araka ny haben'ny sombiny (d) sôkratika mavesatra tany am-boalohany, nizara karbôna kalsioma mavesatra (> 3μm), karbonina calcium (1 ~ 3μm), karbonina ultrafine carbonate (0,5 ~ 1μm carbonate calcium calcium) toetra mampiavaka ny vovoka : a. Vongan-tsiranoka tsy ara-dalàna; b. Fizarana haben'ny sombintsombiny lehibe; c. Haben'ny poti lehibe.
Calcium Carbonate dia be mpampiasa amin'ny fametahana taratasy, plastika, sarimihetsika plastika, fibre simika, fingotra, adhesives, sealants, simika ao an-trano, kosmetika, akora fananganana, firakotra, loko, ranomainty, putty, savoka famehezana, putty, fonosana mahatsapa, fanafody, sakafo (Toy ny siligaoma, sôkôla), sakafo, ny asany dia: mampitombo ny habetsahan'ny vokatra, mampihena ny vidiny, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana (toy ny fanitsiana ny viscosity, ny toetran'ny rheological, ny fahombiazan'ny vulkanisation), ny fanatsarana ny fitoniana dimensional, ny fanamafisana na ny fanamafisana, fanatsarana ny fanontana fampisehoana, fanatsarana ny fananana ara-batana (toy ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny matotra, ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny lelafo, ny fotsy, ny gloss), sns.
Karbaona kalsioma maivana
Ampiasaina amin'ny fanaovana papermaking, plastika, sarimihetsika plastika, kofehy simika, fingotra, adhesives, sealants, simika ao an-trano, kosmetika, akora fananganana, firakotra, loko, inks, putty, savoka famehezana, putty, fonosana mahatsapa, fanafody, sakafo (toy ny fitsakoana gum), Chocolate), feed, ny asany dia: mampitombo ny habetsaky ny vokatra, mampihena ny vidiny, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana (toy ny fanitsiana ny viscosity, ny fananana rheological, ny fanatanterahana ny vulkanisoa), ny fanatsarana ny fahamarinan-toerana, ny fanamafisana na ny fanamafisana, ary ny fanatsarana ny asa fanaovana pirinty. Hatsarao ny fananana ara-batana (toy ny fanoherana ny hafanana, ny famonoana, ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny lelafo, ny fotsy, ny gloss), sns.
Karbaona kalsioma mavitrika
Fanampiny kalsioma. Izy io dia afaka mampiroborobo ny fikajiana ny tsoka sy ny nify, mitazona ny fientanam-po sy ny hozatra ara-dalàna ary mampihena ny fatran'ny capillary. Izy io dia ampiasaina mba hisorohana sy hitsaboana ireo aretina mitaiza ateraky ny tsy fahampian'ny calcium.
Kaolin dia manana fampiasa marobe, indrindra ho an'ny fanaovana taratasy, fanaovana keramika ary akora famerenam-bidy, ary faharoa ho an'ny fonosana, famenon-tady, vera vita amin'ny enamel ary akora simenitra fotsy.
Kaolin dia mineraly tsy metaly, karazana tanimanga sy vato tanimanga anjakan'ny mineraly tanimanga kaolinite. Izy io dia nomena anarana taorian'ny Village Gaoling, Town Jingde, Faritanin'i Jiangxi. Ny kaolin madio dia fotsy, tsara, malefaka ary malefaka, misy plastika tsara sy fanoherana afo. Ny firafitr'ireo mineraly dia matetika misy kaolinite, halloysite, hydromica, illite, montmorillonite, quartz, feldspar ary mineraly hafa.
1. Ny fampiharana ny kaolin ao amin'ny indostrian'ny seramika: ny Kaolin ho an'ny indostrian'ny seramika dia andiana vokatra novokarina niaraka tamin'ny akora avo lenta sy ny haitao mandroso ary ny fitaovana. Ny vokatra dia manana fahadiovana avo lenta, fananana simika miorina, ary manana tombony miavaka tsara mampiavaka ny karazana tokatrano mitovy amin'izany. Ny vokatra vita amin'ny seramika dia vokatra fotsy, matevina, hery mekanika avo lenta ary vokatra avo lenta.
2. Ny fampiharana ny kaolin amin'ny indostria fingotra: ny Kaolin ampiasaina amin'ny indostria fingotra dia vita amin'ny akora avo lenta ary voadio amin'ny elutriation. Ny vokatra dia manana haben'ny sombin-javatra tsara, ambany ny hamandoana, ny adsorption PH sy DPG azo antoka, ary ny habetsahan'ny sedimentation dia avo kokoa noho ny index nomen'ny Ministeran'ny Indostrian'ny Simia.
3. Ny fampiharana ny kaolin amin'ny fikirakirana tariby sy tariby: ny additives fampiasa Kaolin koa dia be mpampiasa amin'ny fikirakirana tariby sy tariby, indrindra ho an'ny tariby EPDM.
4. Fampiharana ny kaolin amin'ny famokarana fambolena: ny kaolin vita amin'ny kolazy dia misy akony manakana amin'ny taratra infrared misy halavan'ny 7-25μM. Rehefa ampiana kaolin vita amin'ny kalsioma novaina dia azo ampitomboina 2-3 ny mari-pana amin'ny alina amin'ny sarimihetsika fambolena°C. Ahena ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny andro sy ny alina, izay mahatonga ny fitomboan'ny vokatra.
5. Ny fampiharana ny kaolin ao amin'ny indostrana fanosotra: ny kaolin vita amin'ny kolazy dia pigmentière vita amin'ny alimika vita amin'ny aliminioma ary additive multifunctional. Manana fotsifotsy ambony, atiny maloto ambany, tsy fahatomombanana simika mahery, mora miparitaka amin'ny rafitra miorina amin'ny rano sy misy menaka ary azo ampiharina loko, loko, putty ary tombo-kase miorina amin'ny rano, sns.
6. Ny fampiharana ny kaolin amin'ny indostrian'ny ranomainty: ny kaolin ho an'ny indostrian'ny ranomainty dia vokarina miaraka amin'ny akora manta avo lenta sy ny haitao ary ny fitaovana avo lenta. Ny vokatra dia manana fahadiovana avo lenta ary fananana ara-batana sy simika simika. Izy io dia afaka manolo ny ampahan'ny diôdiôma titanium, mampihena ny vidin'ny famokarana ranomainty ary manatsara ny fandrakofana ranomainty. Hery, tinting tanjaka, manatsara ny adsorption ny ranomainty, rheology, hery misintona mazava, anti-rotsakorana, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny ranomainty.
7. Ny fampiharana ny kaolin ao amin'ny indostroky lakaoly: ny kaolin dia ampiasaina amin'ny indostroky lakaoly, izay voadio amin'ny akora avo lenta sy ny haitao mandroso ary ny fitaovana. Ny vokatra dia manana toetra ara-batana sy simika miorina, viscosity avo, fotsy fotsy, fampiatoana sy fluidity tsara, ary tsy misy ahitra. Mpameno lakaoly mora vidy izy io. Ireo mpanamboatra eto an-toerana dia nampiasa vovoka kaolin hanoloana ny zava-mahariky mavo mamy.
8. Ny fampiharana ny kaolin amin'ny sehatry ny plastika: ny indostrian'ny plastika dia mampiasa plastika injeniera kaolin, plastika manokana ary kaolin novaina manokana ho an'ny kojakoja fampiasa amin'ny tariby. Izy io dia azo amin'ny alàlan'ny fisafidianana akora ambony sy avo lenta, mampiasa haitao sy fitaovana mandroso, ary novaina tamin'ny alàlan'ny kaonty sy valisoa.
9. Fampiharana ny kaolin amin'ny indostrian'ny petrochemical: ampiasaina ho fampiroboroboana amin'ny fikirakirana solika. Noho ny catalyst nomanin'ny kaolin dia manana hetsika matrix ambonimbony kokoa izy, fanoherana matanjaka ny fandotoana vy mavesatra, ny hetsika katalytic tsara kokoa ary ny fifantenana.
10. Kaolin dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny taratasy. Misy faritra roa lehibe, ny iray dia ny mpanamboatra ampiasaina amin'ny fizotran'ny taratasy, ary ny iray kosa dia ny pigment izay ampiasaina amin'ny fizotry ny firakotra.
11. Ny fampiharana ny kaolin amin'ny indostria vao misondrotra. Kaolin dia manana fotsifotsy sy hamirapiratra, fitrohana rano mahery ary mora simba sy miato amin'ny rano, plastika tsara sy fametahana avo lenta, insulation elektrika tena tsara, solubility asidra tsara, adsorption ion mahery ary fampisehoana fifanakalozana ion, fahombiazan'ny fahotana ary famerenanana be.